Yan Aung: အတ္တစုတ်တံနှင့် စေတသိတ် ကင်းဗတ်စ်...
ဘာလုပ်မှာလဲ ငွေကြေးဥစ္စာတွေ။ ဘာလုပ်မှာလဲ အောင်မြင်ကျော်ကြား လူသိများမှုတွေ။ ဘာလုပ်မှာလဲ အိမ်၊ ကား၊ ခြံတွေ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ။ ဒါမျိုးတွေ မေးဖူးမှာပေါ့။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်သိကျွမ်းတဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက် မမျှော်လင်ဘဲ အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာနဲ့ ကွယ်လွန်သွားတတ်တဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ။
တတ်သလောက် မှတ်သလောက်တော့ ခံစားနေရသူတွေကို အားပေး၊ စုတ်လေးတစ်ချက်သတ်၊ ခေါင်းလေးတစ်ချက်ရမ်းရင်း သည်လိုမေးခွန်းလေးတွေကို မေးမိကောင်းမေးမိနိုင်ရဲ့။ ခဏပါပဲ။ ပြီးတော့လည်း ရထားကြီးက သူ့အရှိန်နဲ့သူ ဆက်ခုတ်မောင်းလို့။ လိုင်းကားပေါ်မှာ ကားကြပ်ခဲ့သမျှ ကားပေါ်ကဆင်းလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးသွားသလိုမျိုး သိပ်ခက်ခက်ခဲခဲတွေကို အချိန်ပေး မစဉ်းစားချင်ဘူး။ ဖြစ်ကာမှဖြစ်ရော အခုထိတော့ ကိုယ့်ဘဝထဲမှာ ကိုယ်အဆင်ပြေအောင် နေလိုက်ဦးမယ်။
ကန်ဘေးနားမှာ အေးအေးဆေးဆေး ထိုင်ရင်း ဘဲအုပ်မိသားစုလေး အစာရှာနေတာကို ငေးကြည့်နေရတာမျိုး။ ပန်းခြံထဲမှာ လမ်းလျှောက်တတ်ခါစ ကလေးငယ်လေး မတ်တပ်ထလိုက်၊ ပြန်လဲကျလိုက် ဖြစ်နေတာလေးကို စိတ်လိုလက်ရ ပြုံးကြည့်မိနေတာမျိုး။ မြူမှုန်တွေဆိုင်းနေတဲ့ မနက်ခင်းထဲကို ကော်ဖီခွက်လေးကိုင်ရင်း ပတ်ဝန်းကျင်ကို ခံစားလို့ အေးအေးလူလူ တိုးဝင်လမ်းလျှောက်နေရတာမျိုး။ ဒါတွေကို ခံစားတတ်ဖို့ အချိန်မှ မရှိရင် ဘဝဆိုတာ ကျော့ကွင်းတစ်ခုလိုပဲ ရုန်းလေနစ်လေ။ စိတ်ထဲမှာ ရှင်သန်ခြင်းတွေရှိဖို့ အကြိမ်ကြိမ် ပြန်ကျော့နေရတဲ့ ထောင်ချောက်မျိုးတွေကို ပါးပါးနပ်နပ် ကိုင်တွယ်တတ်ဖို့ လိုတယ်။
ပန်းသီးကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ စတိဂျော့ဘ်က သူ့အိမ်မှာ ဘာပရိဘောဂမှ မထားဘဲ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းထားတာကို နှစ်သက်သတဲ့။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်လူမှုကွန်ယက်ကို စတင်ခဲ့တဲ့ ဇူကာဘတ်(ခ်)ကတော့ သူ့အဝတ်ဗီရိုထဲမှာ မီးခိုးရောင် တီရှပ်အင်္ကျီတွေပဲထားပြီး တစ်နေ့တစ်နေ့ ဘာအရောင်၊ ဘယ်အင်္ကျီဝတ်ရမလဲဆိုတာကို စဉ်းစားဖို့အတွက် အချိန်မပေးချင်ဘူးတဲ့။ ဘဝကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း နေထိုင်ပြီး သူတို့တွေရဲ့ ဦးနှောက်တွေကို အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ၊ အကြံဥာဏ်တွေ အတွက်ပဲ နေရာပေးထားချင်သူတွေကို လေးစားမိပါရဲ့။ Eleanor Roosevelt ပြောခဲ့တဲ့ အဖိုးတန် စကားတစ်ခွန်းလိုပေါ့။
Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people. တဲ့။
ကိုယ်တွေကတော့ လူတွေအကြောင်း၊ အဖြစ်အပျက်တွေအကြောင်း များများပြောနေမိရင်း ကမ္ဘာကြီးကို ပြောင်းလဲနေသူတွေထဲမှာ ပါနေသလိုမျိုး သွေးနားထင် ရောက်ချင်ရောက်နေမိတတ်တာ။ အင်း. ဒါလည်း လူ့သဘာဝ တစ်ခုပဲလို့ဆိုရင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရသေ့စိတ်ဖြေတွေးမိပြန်ရော။ ဖြေသိမ့်တွေးတာမျိုးဟာ ကိုယ်ဘယ်လိုမှ လက်လှမ်းမမီတဲ့ အရာမျိုးတွေအတွက် ပူလောင်ကျွမ်းနေတဲ့ စိတ်ကိုနှစ်သိမ့်ပေးနိုင်သလိုမျိုး ကောင်းတာတွေလည်း ရှိပါရဲ့။ ရုန်းထွက်သင့်တဲ့ အခြေအနေဆိုးတွေကို မရုန်းထွက်ဘဲ ကံကိုယိုးမယ်ဖွဲ့လို့ ဖြေသိမ့်တွေးနေတာမျိုးကျပြန်တော့လည်း နစ်မွန်းမှုတွေကို ဖြစ်ပေါ်နိုင်စေပြန်တယ်။ ဘယ်အရာမှ အစွန်းမရောက်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲလေ။ ဖြေသိမ့်သင့်၊ မသင့်ဆိုတဲ့ အစွန်းတရားနှစ်ခုကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်ဖို့ သင့်တော်တဲ့ ပညာဥာဏ်တစ်ခုရယ်၊ ဘက်မလိုက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုရယ်တော့ လိုအပ်မှာ သေချာတယ်။
ခုတလော ရာသီဥတုကလည်း အပြောင်းအလဲ သိပ်မြန်လွန်းတယ်။ မနေ့ကပဲ နွေရာသီအတိုင်း နေကျဲကျဲတောက်ပူနေခဲ့ပြီးတော့ သည်မနက်ကျတော့ လေတဟူးဟူးနဲ့ အနွေးထည် နှစ်ထပ်ဝတ်တာတောင် သိပ်မနွေးချင်လှဘူး။ လူသားတွေရဲ့ အတောမသတ်တဲ့ အတ္တတွေထဲမှာ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ သစ်ပင်တွေ စတေးခံခဲ့ရတာ ဘယ်လောက်များနေပြီလဲ မသိ။ အယ်လ်နီညို သက်ရောက်မှုဆိုတာ တကယ်တော့ ခုတ်လှဲခံလိုက်ရတဲ့ သစ်ပင်တွေရဲ့ အရိုးတွန်သံ ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမှာ။ သစ်ပင်တစ်ပင်ဖြစ်ဖို့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာတတ်ပေမယ့် ခုတ်လှဲပစ်လိုက်ဖို့က တခဏပဲ လိုအပ်သလို တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြား ယုံကြည်ချစ်ခင်မှုတွေ ဖြစ်ထွန်းဖို့ အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုလိုအပ်ပေမယ့် မုန်းတီးပြတ်စဲဖို့က တဒင်္ဂအထင်လွဲမှားမှု တစ်ခုပဲ လိုအပ်နေတတ်တာ သိပ်တော့ မတရားလှဘူး။ အနုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့ အကြောင်းတရားတွေဟာ အကျိုးသက်ရောက်မှု ပိုကြီးနေတတ်တာမျိုးလား။ ဒါမှမဟုတ် လူသားတွေရဲ့ ခံယူမှုဟာ အဆိုးဖက်ကို တိမ်းလွန်းနေတာမျိုးလား။
တစ်ခါတုန်းက ကော်ဖီဆိုင်မှာ ထိုင်စကားပြောရင်း သူမနှုတ်ခမ်းလွှာလှလှလေးက စကားလေးတစ်ခွန်း အမှတ်မထင် ထွက်ကျခဲ့ဖူးတယ်။
“အကျင့်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ဖို့ (ဒါမှမဟုတ်) ဖျောက်ဖျက်ပစ်ဖို့ ပျမ်းမျှ အချိန် သုံးပတ်ကြာတယ်” တဲ့။ အဲဒီ့တုန်းက ရုတ်တရက် ပြန်ပြောဖြစ်လိုက်တဲ့ ကိုယ့်စကားကို ရယ်သွမ်းသွေးနေတဲ့ သူမမျက်နှာလေးကိုတော့ သုံးနှစ်ကြာတောင် မေ့လို့မရသေးဘူး။
“စစ်မှန်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတာ ကမ္ဘာတွေခြားနေခဲ့ရင်တောင် မေ့ဖျောက်ပစ်ဖို့ မလွယ်လောက်ဘူး ထင်တယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို မြင်လိုက်တာနဲ့ သူ့ကို ရင်းရင်းနှီးနှီး သိကျွမ်းချစ်ခင်ခဲ့ဖူးသလိုမျိုး မင်းမှာ မဖြစ်ဖူးဘူးလား။ ကိုယ်တော့ ဖြစ်ဖူးတယ်။ မင်းကို စမြင်လိုက်တဲ့ အချိန်အခိုက်အတန့်ကပေါ့…”
“ခံစားချက် ကြီးတာ၊ အစွဲအလမ်းကြီးတာမျိုးက မကောင်းဘူး အစ်ကိုရဲ့။ သေရင် မကျွတ်မလွတ် ဖြစ်တတ်တယ်”
နှုတ်ခမ်းလေးတွန့်ပြီး မျက်မှောင်ကျုံ့ပြတဲ့ သူမမျက်နှာလေးကို နှလုံးသားထောင့်တစ်နေရာက ပြန်ထုတ်ကြည့်ရင်း ခပ်တိုးတိုးလေး ပြောမိတယ်။
“ကိုယ် ခုထိ မကျွတ်မလွတ် ဖြစ်နေဆဲပါပဲ ကလေးရယ်…”
ဖျတ်ခနဲ ထလင်းတဲ့ လမ်းမီးတိုင်တွေက အတိတ်ကို ရောက်သွားတဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကူးတွေကို ပစ္စုပ္ပန်ထဲ ပြန်ဆွဲခေါ်တယ်။ နေ့ပြီးရင် ညလာသလို အခက်အခဲတွေကို ကျော်လွှားပြီးရင် အေးချမ်းတည်ငြိမ်တဲ့ ဘဝတစ်ခုကို ရဖို့ ပိုနီးစပ်လာတတ်စမြဲပါပဲ။ ပိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ ဆုံးရှုံးခြင်း၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ ကြေကွဲခြင်း၊ ချီးမွမ်းခံရခြင်း၊ ကဲ့ရဲ့ခံရခြင်းဆိုတဲ့ အစွန်းတရားတွေကြားထဲမှာ တတ်နိုင်သလောက် တည့်မတ်အောင် လျှောက်ရင်း ဘဝခရီးလည်း နေမွန်းတည့်ခဲ့ပြီ။
ကိုယ့်ဘေးမှာ တစ်ချို့ရှိခဲ့ပေမယ့် သူတို့ မရှိခဲ့ဘူး။ တစ်ချို့မရှိခဲ့ပေမယ့် သူတို့ ရှိနေခဲ့တယ်။ ငှက်ကလေးတွေလည်း အိပ်တန်းဝင်ကုန်ကြပြီ။ တစ်နေ့တာ လောင်ကျွမ်းတောက်ပမှုတွေကို အသာရုပ်သိမ်းလို့ ဘဝဇာတ်ခုံကို ခေတ္တပိတ်သိမ်းကြဦးစို့။ ထိုင်ခုံတွေကိုတော့ မသိမ်းလိုက်နဲ့ဦး။ မနက်ဖြန်တွေအတွက် လိုချင်လိုဦးမှာ။
မမြင်စေချင်ရင် ကန့်လန့်ကာ ချထားလိုက်ရုံပဲပေါ့။
အဝတ်ဘီရိုကို ဖွင့်ကြည့်လို့ နောက်တစ်နေ့အတွက် ဝတ်စားဆင်ယင်ရမယ့် ဝတ်စုံကို အဆင်ပြေမပြေ တစ်ချက်စစ်ကြည့်တယ်။
သေချာတာကတော့ အဝတ်အစားတွေ အားလုံးဟာ အရောင်တစ်ရောင်တည်း မဟုတ်ကြဘူး…
မေ (၁၅)၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်။ ။